Mpanamboatra sy mpamatsy jiro taratra | Ming Feng
Factory Price-ISO kalitao
1. Mingfeng Lighting dia manana jiro LED feno momba ny rafitra fitsirihana kalitao, ny rafitra MF dia manao ny asa alohan'ny famokarana, ny famokarana ary ny rafitra fanaraha-maso henjana araka ny AQL aorian'ny famokarana. Ny jiro LED LED rehetra dia mihodina amin'ny fitsapana 100%, ary ny fitsapana mandrehitra tsy misy fiatoana hatramin'ny 48 ka hatramin'ny 72 ora.
2. Amin'ny maha-mpanamboatra jiro LED matihanina manana traikefa nandritra ny 15 taona momba ny famolavolana, famokarana ary fanamboarana trano, ny orinasanay dia manampahaizana manokana amin'ny ambongadiny jiro, ary ny vokatra mahazatra dia manome vanim-potoana antoka mandritra ny 5 taona, ny vokatra sasany dia manome fotoana manome antoka 10 taona an-tsakany sy andavany ny tetikasa
& filan'ny mpanjifa. Ny fotoana itarihana santionany dia 1 herinandro, ary 2 herinandro ho an'ny filaharana betsaka.
3. Ny paikadim-pamokaranay dia ny tsy fanaovanay mpivarotra ambongadiny, mpaninjara, mpivarotra ary antoko fahatelo hafa, vokatr'izany, Ming Feng Lighting Co., Ltd amin'ny maha mpanamboatra matihanina azy dia manana tombony lehibe amin'ny vidiny / kalitao / fampisehoana. Ny vokatra rehetra dia alefa mivantana avy amin'ny orinasa MF.
4. Ming Feng Lighting Co., Ltd dia manana vondron'orinasa injeniera manan-talenta ao amin'ny R& D, ary injeniera varotra iraisam-pirenena matihanina hahazoana antoka ny fifampiresahana, MF dia manome serivisy famolavolana jiro LED ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy. Manaraka ny tetikasan'ny mpanjifanay, ny ekipanay injeniera dia manome soso-kevitra momba ny tsipika vokatra, manaova kajy maivana amin'ny resaka ROI (Retrun of Investment) araky ny sary amin'ny sary, ary ny ROI dia manome drafitra fitsitsiana angovo hampihenana ny vidin'ny jiro ary hiantoka ny jiro. Ny famerenam-bola dia ambany noho ny 1.5 taona (amin'ny tranga sasany, ny fampiasam-bola dia azo averina ao anatin'ny 1 taona miankina amin'ny fepetra momba ny tetikasa).
Raha tsy misy olona afovoany dia mahazo VOLA avy amin'ny MF avy hatrany ianao. Ny mpanjifa dia eo amin'ny toerana tsara indrindra eo amin'ny tsena eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa.
Ny vokatra rehetra dia novokarina 100% teo ambanin'ny rafitra ISO, ny milina marani-tsaina isan-karazany miaro fari-pitsipika tsara kalitao 200% tsara tantana.
Herinandro 1 ho an'ny lamina santionany.
2 herinandro ho an'ny baiko lehibe.
3 herinandro ho an'ny entana namboarina.
5 taona ho an'ny jiro LED eny ivelany
10 taona ho an'ny jiro LED eny ivelany (Conditional)
Warranty dia antoka.
Tsy misy omby.
Izahay dia namokatra hazavana nandritra ny 10 taona mahery
Jiro ao anaty LED
Fahazavana 1.LED Panel 2.LED Down Light 3.LED Track Light 4.LED Triproof 5.LED High Bay Light 6.LED Track Light
Jiro 7.LED valin-drihana 8.Jiro rindrina LED 9.Jiro Linear LED 10.Jiro SpotED
Fahazavana 1.LED tondra-drano 2.LED hazavana avo lenta 3.Jiro Stadium LED 4. Jiro an-dalambe LED 5. Jiro zaridaina LED
6. Jiro porofo mipoaka LED. 7. Jiro fanasan-drindrina LED 8.Jiro canopy LED 9. Jiro amin'ny tionelina LED 10. Jiro LED taratra
Eco Led Lead Light Safo-drano
Eco Led Lead dia natao ho an'ny tetezana, faritra fitrandrahana, indostrian'ny fanatanjahantena sy seranan-tsambo. Ity fianakaviana ity dia ao amin'ny haingam-pandeha sy ny fampisehoana miaraka amin'ny fanampiana amin'ny famolavolana tena sy ny kilasy miavaka, dia misy antoka 5 taona toy ny mahazatra.1. Fanasokajiana Lamp Projection Lamp:① Fihodinana sy simetrialyNy jiro dia manangana taratra symetrical rotometrical rotorn, ary ny famaky symmetry ny loharano maivana misy fizarana hazavana mihodina dia apetraka amin'ny famaky ny reflector; Ny curve isintensity amin'ny jiro toy izany dia concentric.Rehefa manazava ny jiro tokana ity karazana projection ity, ny toerana elliptika dia azo amin'ny lafiny hazavana, ary tsy miova ny hazavana; Na izany aza, rehefa jiro ny jiro maro an'isa, ny hazavana maivana dia superimposed, izay afaka mamokatra fiantraikany ratsy. Ohatra, ny jiro famandrihana symmetrika an-jatony no ampiasaina amin'ny kianja, izay napetraka amin'ny tilikambo avo manerana ny kianja mba hahazoana hazavana sy hazavana avo lenta.② Sora-bolo roa symetrika roaNy curve ISOInTensity amin'ity karazana jiro projection ity dia misy fiaramanidina simetrika roa. Ny ankamaroan'ny jiro dia mankasitraka ny simetrika symmetrical reflector, ary ny loharanom-pahazavana maivana dia napetraka amin'ny famaky cylindrical.③ Ny laharana fiaramanidina simetrikaNy fiaramanidina ISOInTENSITY amin'ny jiro dia manana fiaramanidina simetrika tokana. Ny jiro dia hatao amin'ny taratry ny cylmetrical cylmetric na ny simetrika cylindrical cylindrical plustrid mba hamerana ny jiro * Ny mahazatra dia ny fizarana hazavana miharihary. Ity karazana hazavana maivana ity dia afaka mahazo fizarana tsy manam-paharoa amin'ny jiro tokana.④ Forms asymmetricNy curve Isointensity amin'ny jiro toy izany dia tsy misy fiaramanidina simetrika. Ny ankamaroany dia mampifangaro jiro maivana mifangaro amin'ny karazana loharanom-pahazavana samihafa misy fahasamihafana lehibe amin'ny fahasamihafana lehibe amin'ny fizarana hazavana sy jiro manokana novolavolaina araka ny fepetra hazavana manokana momba ny toerana ampiasaina.2. Toetran'ny jiro projection LED:Ny jiro projection LED dia mampiasa herinaratra avo (ny singa led led dia ho voan'ny lenta avo lenta vita amin'ny pmma, izay ampiasaina indrindra amin'ny fizarana ny hazavana izay alefa amin'ny alàlan'ny LED, izany hoe optika faharoa); Orinasa vitsivitsy no misafidy ny hery 3w na mihoatra ny avo kokoa noho ny teknolojia fanilihana hafanana tsara. Ny jiron'ny projection dia mety amin'ny fotoana lehibe, trano ary jiro hafa.
Ahoana no MF laboratoara asa?
Jiro LED vokatra Mifandray akaiky amin'ny fiarovana manokana ny mpanjifa.Tokony hanamafy orina ny fianarana sy ny fikarohana ny vahiny lalàny sy ny didiny, hentitra mifehy ny kalitaon'ny vokatra LED sy hanafoana ny loza mety leakage;Hanamafy orina ny fiaraha-miasa amin'ny antoko fahatelo-andrim-panjakana sy ny fanaovana fitiliana matihanina mpanamboatra fitaovana fitiliana, manara-maso ny kalitaon'ny famokarana rohy rehetra ny vokatra,ary hanara-maso ny dingana rehetra amin'ny vokatra famolavolana, famokarana, dingana manan-danja, lahatsoratra voalohany mamantatra ny vokatra vita santionany fanaraha-maso.Nitarika orinasa dia tokony mandoa vola bebe kokoa sy ny kalitao ny vokatra Aza Hadinoina ny fampandrosoana fahafahana noho ny kalitao olana. Amin'ny maha-jiro na ny orinasa mpamatsy fitaovana manohana, ireo fitaovana fitiliana na tetika tokony ho fantatra mazava!
Ahoana ny fomba amidy MF
Ming Feng tsara indrindra amin'ny fomba amam-barotra ny mpamatsy, ny fanamarinana Universal dia ahafahan'ny vokatra an-tsokosoko an-tsena malalaka, ny mpanjifa dia afaka manafatra avy amin'ny orinasa MF faingana.Ny milina dia ampiasaina amin'ny fahatsapan'ny fitrandrahana samirery amin'ny haino aman-jery samihafa, izay dingana fanovana ara-batana. Voalohany, ny faran'ny tariby volamena dia tsy maintsy raisina mba hamoronana sphere (MF Mampiasa tsindry elektronika avo lenta mba hamolavola faritra), ary ny fonosam-bolo vita amin'ny lasitra dia ho tsara aloha; Avy eo, eo ambanin'ny hetsika miaraka amin'ny fotoana sy ny fanerena, ny volam-barotra volamena dia mamoaka ny fanalefahana plastika eo amin'ny sisin-trano vy, mba hahatratrarana fifandraisana azo itokisana ny haino aman-jery roa, ary amin'ny alàlan'ny fikorontanana amin'ny ultrasonic, ny fatoram-bolo Eo ambany asehon'ny fampifandraisana atomika, mba hahatsapa ny fitrandrahana tariby volamena. MF Gold Wire Ball Shelding dia ambony noho ny silicon aluminium Wire Wire Wire amin'ny fampisehoana elektrika sy ny fampiharana ny tontolo iainana, na izany aza, satria ny fambolena misy metaly sarobidy dia tsy maintsy hafanaina, somary tery ny fiakarana.
Inona ny fizotran'ny loko powder coating?1, ny fizotran'ny fanaovana sôkôlà, ny fizotry ny fanenam-borona ho an'ny olona maro dia mihevitra fa ny fitsaboana ny menaka dia fitsaboana, raha ny marina dia tsy mety ho diso hevitra izany. Raha ny fanazaran-tena dia azo lazaina ny mofomamy hoso-doko mba ho coating sy ny dingana iray. Ny fizotran'ny fanodinana loko dia toy izao: Ny loko isaky ny misy loko dia ampiharina amin'ny substrate, alefa any amin'ny efitrano fanenam-paty tsy misy vovoka ho an'ny efitrano fanamainana, izay miverimberina in-telo na mihoatra.2, ny fandosirana ny paositra ny paositra paositra ny paositra dia misy fitaovana vita amin'ny paositra dia karazana fitaovana indostrialy. Ny firafiny dia manangana rafitry ny fivoriambe. Ny vatan'ny efitrano sy ny reny dia misy ny fanentanana an-tsokosoko sy ny fenitra amin'ny plastika ary ny rindrina plastika manondraka, izay misy fanimbana tsara sy mafana. Misy varavarana miasa eo amin'ny sisin'ny efitrano hanamorana ny fidirana amin'ny mpiasa. Izy io dia fitaovana miaraka amin'ny varavarana voafatotra aluminium, ary ny varavarana varavarana dia misy varavarankely fandinihana. Ny fiasa lehibe indrindra dia ny fanatanterahana ny fizotran'ny mofo.3, farany, miverimberina imbetsaka ny primer mandritra ny 3-5. Rehefa avy nanafika ny tsirairay, poloney ny loko vita amin'ny mofo misy lamba vita amin'ny lamba sy lamba. Aorian'ny sary hosodoko dia hikasika ny velaran'ny jiro maneno amin'ny tananao mba hahitana raha misy vovoka sy banga. Ny fanalefahana ny jiro vita amin'ny loko hoso-doko dia ho lemaka sy malama tsy misy sombiny ary tsy misy fahatsapana tsy mahazatra.4, ny fizotran'ny fandokoana, manondraka 1-3 heniky ny loko mamirapiratra, ary mofomamy amin'ny mari-pana avo lenta mba hanamafisana ny sosona loko. Aorian'izany dia tapaho amin'ny zavatra sarotra. Ny hazom-boasary dia ho afaka amin'ny famoretana, ny horonantsary feno loko mionganana, ny hoditra fotsy mianjera ary ny tsy fahalalàna hafa, ary ny sarimihetsika vita amin'ny mofo dia tsy ho simbaina.
Mingfeng Lighting Co., Ltd. dia mpanamboatra jiro LED natsangana tamin'ny 2006.
Ny lisitry ny vokatra dia misy jiro fambolena LED, jiro LED, jiro valin-jiro indostrialy, jiro tontolon'ny LED ary jiro ao anaty anaty LED. Ny vokatray dia be mpampiasa amin'ny rafitra jiro lehibe ampiasaina amin'ny toeram-piompiana, ozinina, sekoly, tetezana, tonelina, seranan-tsambo, seranam-piaramanidina, ary fampiharana hafa maro. Mingfeng manokana amin'ny ambongadiny jiro avo lenta avo lenta. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa.
Tetikasa hazakazaka France Horse
Ny hazavana tondraka MF dia zavatra tonga lafatra hanazavana ny hazavana soavaly, ny mpanjifa avy any Frantsa dia tia ny jirontsika, ny hazavana amin'ny alina dia mampifaly ny soavaliny mandritra ny andro.Ny firazanana dia mila jiro mety amin'ny lalan'ny lalan-kalehan'ny soavaly, satria raha vao mihorohoro ny mason'ny soavaly ny jiro dia hanova ny toetr'andro ary hampitombo ny mety ho fatiantoka amin'ny lamosin'ny soavaly, ka mila manana fepetra manokana ho an'ny zoro jiro.Ming Feng Airforce Life Lead Las dia afaka manolo ny jiro vy vy miaraka amin'ny hery mitovy amin'ny 1: 2, ny fitahirizana angovo mihoatra ny 60%, ary hampihena ny fanjifana fitaovana fizarana sy fitaovana famaranana; Ny fiainana fanompoana dia mety hahatratra mihoatra ny 60000 ora ary 10 taona ny warranty. Raha ampitahaina amin'ny loharanom-pahazavana maivana vy vy misy ny fiainana antonony amin'ny fiainana antonony amin'ny 3000 ~ 5000 ora, mihena be ny fikojakojana ny jiro, mba hamonjy ny vidin'ny fikojakojana. Mandritra izany fotoana izany, ny jiro nentim-paharazana volamena nentim-paharazana dia manomboka mandritra ny fotoana maharitra, ary 30 minitra vao afaka mamerina ny jiro raha toa ny toerana tsy nahy dia nanary fahefana ary namerina ny famatsiana herinaratra. Ny jiro tariby dia azo avadika sy hialana tanteraka ny olan'ny fanelingelenana lalao efa ela izay vokatry ny tsy fahombiazan'ny herinaratra tsy nahy.Ny famolavolana fehin-kibo fehikibo telo, fanitsiana mora, fanitsiana mora, fanitsiana sy fanitsiana mitsangana, miaraka amin'ny habe mazava, ny hazavana dia manaraka ny fo.Fomba fametrahana maromaroMety amin'ny toerana ara-panatanjahantena lehibe, trano fandraisam-bahiny, trano fandraisam-bahiny, trano hazakazaka an-tsokosoko, trano fiofanana an-tsoavaly sy toerana hafa, ary mahafeno tanteraka ny filàna hidirana HD any an-trano sy any ivelany.Ankehitriny, miaraka amin'ny fiakaran'ny tsikelikely ny hetsika nasionaly, ny jiro ara-bady dia nanjary antony manan-danja iray izay misy fiantraikany amin'ny fampisehoana tanteraka ny karazana hetsika hazakazaka rehetra. Raha ny mpisava lalana ny tsena amin'ny hazavana avo lenta, dia hanohy ny fampiroboroboana ny R& D sy ny fanavaozana ny vokatra LED Righurse Producture, Miezaha hamorona jiro sy fanitsiana ny angovo, ary manaova ezaka maharitra mandritra ny fampandrosoana ny indostrian'ny hazakazaka
Bapa baomba any Japon
Ny tranombarotra parking parking dia mampiasa ny hazavana tripidika izay manazava ny 150lm / W, dia jiro tsara tarehy amin'ny alàlan'ny 2x58WMandritra izany fotoana izany, mf dia manome fantsona hendry miaraka amin'ny vahaolana sensor microwave ho an'ny fiantsonana.Ny toe-javatra misy ankehitriny amin'ny fijanonan'ny tany ambanin'ny tany: Ny jiro amin'ny fiantsonan'ny parking ambanin'ny tany dia mahantra ary ny olana jiro dia nanelingelina ny mpamorona sy ny mpampiasa, indrindra amin'ireto lafiny manaraka ireto:1. Ny garazy ambanin'ny tany dia toerana tena maizina. Raha tsy misy hazavana ara-potoana dia mora hitranga ny lozam-pifamoivoizana. Ankoatr'izay, ny fandehan'ny olona dia kely indrindra, izay matetika manome toe-javatra tsara ho an'ny mpanao heloka bevava ary faritra malemy ny fitantanana fiarovana.2. Lafo ny jiro. Ny jiro amin'ny ankapobeny dia mila asa 24 ora, ary ny fiampangana herinaratra isan-taona dia lehibe.3. Lehibe ny jiro garazy, ary lehibe ny entan'ny fanoloana sy ny fikojakojana, izay sarotra amin'ny fitantanana fananana.Ny toe-javatra ankehitriny alohan'ny fanovanaNy fantsom-pitsaboana LED manan-tsaina dia mamaha ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny jiro tsy tapaka amin'ny jiro tsy tapaka amin'ny jiro sy ny famonjen'ny herinaratra ao ambanin'ny tany, ary ny fahombiazan'ny herinaratra dia mahatratra 85%. Nitarika jiro garazy manan-tsaina ampiasaina amin'ny fanovana jiro amin'ny garazy:Ny famoronana Radar Rado Radar dia nitarika ny fantsom-barotra Radar Radar dia mampiasa ny fitsipika Doppler mba hampitana famantarana microwave avo indrindra. Aorian'ny famoahana ny programa momba ny programa sy ny fanodinana, ny famatsiana famantarana sy ny herinaratra dia mamorona radar radar amin'ny radar amin'ny alàlan'ny famatsiana herinaratra sy fanodinana mandeha ho azy. Ny jiro garazy dia afaka mamantatra tsara ny tontolo elektromagnetika manodidina ary manitsy ny toeran'ny asa.Ny fanamboarana radar dia nitondra jiroNy toetran'ny fampiasa amin'ny Microwave Radard Radar:Rehefa mihetsika ny olona na fiara, ny jiro mihetsiketsika dia misy 100% tanteraka, ny herin'ny asa dia 18w, ary ny hazavana dia indroa ny hazavana indroa ny jiro fluorescent. Rehefa miala ny mpandeha an-tongotra sy ny fiara, aorian'ny fanemorana ny 25 ± 5 segondra, dia mivadika ho an'ny fanjakana kely misy mazava ny hazavana amin'ny 20% feno, ary ny heriny miasa dia tsy mihoatra ny hery miasa amin'ny ankapobeny 5w. Ny hazavana rehefa mamirapiratra dia mety hahatratra tanteraka ny filàna filaminana, fanaraha-maso ary jiro. Raha misy olona na fiara iray nifindra tamin'ity faritra ity, ny jiro tsy an-kiato eto amin'ity faritra ity dia 100% foana. Ny radar mihetsiketsika mihetsiketsika dia manarona ny 360 degre ambanin'ny jiro, ary ny halaviran-davitra dia 6-8m. Izany hoe, ny faritra misy radius amin'ny 6-8 metatra miaraka amin'ny olona sy ny fiara ho ivon'ny faribolana dia mamirapiratra.Ny sary an-tsokosoko amin'ny famoronana radarNy tombony amin'ny tsy fitoniana Rade Radar dia nitarika ny jiro radar1. Mahaiza mihetsika ho azy ireo zavatra mihetsika toy ny olona sy ny fiara, ary manome jiro mety sy ara-potoana araka izay takiana. Tonga ny olona sy ny fiara ary mandehandeha daholo, ny olona sy ny fiara dia mandeha kely, matory mandeha ho azy, esory ny jiro tsy mety, ary hanova tanteraka ny fanjakana "jiro lava" lava indrindra tao anatin'ny 24 ora.2. Ny fampiharana ny loharanom-pahazavana LEAD LEAD amin'ny jiro Radar dia manapotika ny tombony amin'ny vakana Lamp Lamba: Fiainana maharitra, fahombiazana avo lenta, fahaiza-miaina be sy fifehezana mora sy fifehezana mora sy mora fehezina. Manalavitra ny fatiantoka amin'ny jiro mahazatra: Tsy misy ny tsy fahombiazan'ny mari-pana avo lenta, ny tombontsoam-pahombiazana avo lenta dia afaka mamerina haingana ny fampiasam-bola avo haingana, dia mitahiry ny vidin'ny serivisy sy ny vidin'ny serivisy sy ny sarany Miteraka tena tsara ny famporisihana.
Tetikasa maivana Atsinanana Afrika atsimo
Ming Feng Lighting Simple Succtersfull dia namarana ny tetikasa tany Afrika Atsimo ho an'ny jiro Soccer Stadium, ny mpanjifa dia sombin-javatra amin'ny alàlan'ny fanovana ny fampitahàna ny jiro taloha, dia mamonjy volon-koditra ny herinaratra.Araka ny voalazan'ilay tetik'asa fanatsarana sy fanamboarana ny kianja Johannesburg (lalao an-trano), ny harivan'ny 22 jona, dia nanapa-kevitra ny rafi-panamboarana ny tsato-jiro valo, izay nisy jiro roa fitsapana. Taorian'ny fanandramana rafitra hafa tamin'ny 23 jona, ny jiro valo dia tamin'ny 6:30 hariva tamin'ny 23 jona tamin'ny 23 jona. Tsy mitovy amin'ny fametrahana jiro jiro ao amin'ny kianja filalaovana ny Johannesburg Olaimpika amin'ny 3 metatra avo, Ny kianja amin'ny foibe fanatanjahantena dia misy "Big Mac" valo, ny tsato-by, 53 metatra ny haavony (51 metatra ny tsangambato, miampy ny 3 metatra), mandanja 19 taonina. Vita ny fanandratana tamin'ny volana Mey, ary ny andian-jiro sy ny jiro sy ny jiro dia milanja 4 taonina, ny haavony amin'ny 8 habe 8 manandratra ny famolavolana haingam-pandeha haingam-pandeha avo lenta amin'ny firenena.
Vahaolana maivana Super Market Canada Super
Vita ny tetik'asa Super Super tamin'ny taona 2016, ny tetikasa dia mitaky fiantraikany maivana be dia be mba hahasarika ny fijerena ny mpanjifa bebe kokoa rehefa manangona.Miaraka amin'ny lazan'ny indostrian'ny Internet, ho an'ny orinasam-pivarotana, dia fotoana sy fanamby. Voalaza fa tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2016 dia tsy nisy ny orinasam-pifandraisana be dia be ny fanatratrarana fitomboana avo roa heny sy ny tombony. Noho izany, tena ilaina ny mahafeno ny filàn'ny vondrona mpanjifa samihafa miaraka amin'ny modely ara-barotra tsy mitovy, ary ny kalitao sy ny traikefa amin'ny toeram-pivarotana dia zava-dehibe kokoa.Ny jiro dia iray amin'ireo faritra lehibe amin'ny tsenambarotra mba hanatsarana ny kalitao ary hampitombo ny fahatsapana traikefa. Ny jiro dia mila hazavana sy alokaloka. Ny fitoviana fahazavana sy ny alokaloka mety dia afaka manatsara ny traikefan'ny mpanjifany ary hanatsara ny fampiononana; Ny hazavana Ming Feng dia manome vahaolana hazavana ho an'ny toeram-pivarotana samihafa miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana, izay afaka manatsara ny tsiron'ny entana aseho, mampitombo ny fividianana hery ary hanatsarana ny vokatry ny tsenam-barotra ankapobeny.Ny jiro amin'ny ankapobeny dia mizarazara amin'ireto sokajy telo iretoLamba lamba vita amin'ny lamba: Afaka manome jiro tsara ho an'ny talantalana izy io; Ny tahan'ny fampiasa jiro dia avo, fa ny hazavana sy ny fitoviana dia mahantra, izay tsy mety amin'ny fanitsiana ny lohan'ny pile.Lamp fizarana vertika: afaka manome jiro tsara ao amin'ny habaka fivarotana, miaraka amin'ny fitoviana avo, fa ny jiro dia mpitovo, tsy misy fiakaran'ny hierarchy, ary tsy ampy ny hazavana ara-barotraLamp Composite Vertical: Afaka manome jiro tsara ao amin'ny toeram-pivarotana izany, miaraka amin'ny fitoviana avo, fahatsapana ny fahatsaran'ny hajia, ny hazavana avo lenta, fa ny fiheverana avo lenta, fa ny fiheverana kosa dia tokony ho karama.Ny sain'ny mpanjifa dia mety hahasarika ny faritra misy rivo-piainana tsara. Ao anatin'ny tontolo maizina ihany no ahafahan'izy ireo mahita faritra marevaka. Ao amin'ny fizotran'ny famolavolana jiro rehetra ao amin'ny Boutique Life Supermarket, ny jiro rehetra dia ny lakile. Rehefa avy namantatra ny fifandraisan'ny hazavana sy ny alokaloka dia nanjary zava-dehibe ny fifehezana ny jiro. Ny toerana sy ny fametrahana jiro dia mila mandinika ny fahafenoana ny fametrahana sy ny fikojakojana, ny fikolokoloana ary ny fifehezana sy ny fifehezana amin'ny laoniny. Ho an'ny fomba fampisehoana samihafa dia tokony hifanaraka tsara ny jiro jiro.
Azafady, apetraho eto ny fifandraisana, mba ho eo am-pelatananao ny injenieran'ny varotra atsy ho atsy